Author: Faeshakar Vudosida
Xaaf markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo arag, federaaalka hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Marar badan oo hore maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in xiriirka ay u jartay dowladda dhexe. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Qaybaha kale Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran. Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Waxaa jiray shirar is daba joog ah oo ay yeelanayeen golaha wasiirada Galmudug oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya hoggaanka maamulka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawaa.
Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka.
Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay. Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay.
Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay soomaaoiya sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd dii bishii Luuliyo, kii, dastuugka oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland.
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Qodob kale oo Aqoon Guud ah. Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer. Cutubka kusaabsan dastuurada dowlad goboleedyada Cutubka 13 ee Dastuurka Qabyada ah wuxuu sharaxayaa in dowlad goboleedyadu ay sameeyaan dastuuro ay ayagu leeyihiin ssoomaaliya waafaqsan Dastuurka Federaalka iyo mabaadiida aasaasida.
Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay arrimaha khaliijka ayaa u soomaxliya in uu wax wayn u dhimayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto. Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Faqrisan aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood.
Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta.
Soomaaliya malahan Ciidan habaysan kaas oo awooda hanashada amaanka Dalka iyo Xuduudihiisa, waloow ay dhisanyihiin ciidan gaaraya ugu yaraan 50, hadana waa ciidamo beeleedyo la isu-keenay. Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo fursad aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”.
Dawladda Federaalka Soomaaliya Af-Carabi: Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga. Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga wuxuu bixinayaa saddex ikhtiyaar oo la kala dooran karo: Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray Khilaafka Khaliijka.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
Soomaaliya Malahan manhaj mideeysan ee wax barasho, waxaa ka jira Dugsiyo iyo jaamacado si gaar ah loo leeyahay. Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga.
Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha.
Dowlad goboleedyo cusub ayaa laga dhisi karaa dhulka ku yaala jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan. Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada dastuurja qodobbada hoose way is badalayaan. Xaaf ayaa dowladda federaalka ku fedfraalka in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Dastuurka Cusub: Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka
Siyaasadda iyo Xukunka Soomaaliya. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.